Jungleland (2020) | MM Movie Store
လဝှေ့ထိုးတဲ့နရောမှာထူးခြှနျတဲ့ ညီဖွဈသူလိုငျးယနျး..ညီဖွဈသူကထူးခြှနျလောကျ အကွှေးပတျလညျဝိုငျးနပွေီးအမွဲဒုက်ခရှာတတျတဲ့ အကိုဖွဈသူ စတနျ..လဝှေ့ကြျောဖွဈလာခဲ့ရငျ ဘ၀သဈစမယျလို့ကွှေးကြျောနတေတျတဲ့ ညီအကိုပေါ့။
တဈနတေ့ော့ လဝှေ့ပှဲတဈပှဲရှုံးနိမျ့သှားလို့ အကွှေးရှငျတှရေဲ့စိတျတိုငျးကြ Junglelandဆိုတဲ့ ဆနျဖရနျစစ်စကိုမှာကငျြးပတဲ့ပှဲမှာ သှားထိုးသတျဖို့ညီအကိုနှဈယောကျပွငျရပါတော့တယျ။အဲဒီခရီးစဥျတလြောကျ စကိုငျးဆိုတဲ့ကောငျမလေးကိုပါ ကွှေးရှငျတှကေ ရီနိုကိုပို့ပေးဖို့တာဝနျပေးပါတော့တယျ။
လိုငျးယနျးရယျ စကိုငျးရယျ စတနျရယျ…သူတို့သုံးယောကျအတူတူသှားရငျးနဲ့ဘာတှကွေုံတှရေ့မှာလဲ?အတူတူသှားရငျးနဲ့ စကိုငျးအကွောငျးကိုပါသိလိုကျရခြိနျမှာ သူတို့ညီအကိုနှယောကျဘာဆကျလုပျမလဲ?ညီအကိုနှဈယောကျကရော အဆုံးထိမပွောငျးလဲဘဲ ခဈြခငျသှားမှာလားဆိုတာ အဆုံးထိစိတျဝငျတစားကွညျ့ရှု ရမှာပါ။
ရိုးရိုးရှငျးရှငျလေးပဲပွသှားတဲ့ဒီကားလေးကစိတျထဲမှာစှဲနဈခံစားမိစမှောပါ။ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျဖို့ ပရိတျသတျကွီးအတှကျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ဒရာမာကားကောငျးကောငျးလေးတှမြှေျောလငျ့နသေူတှအေဖို့တော့ ကှကျတိပါပဲလို့ညှနျးလိုကျပါရစေ။ဇာတျကားလေးနာမညျက Jungleland(2019)ပါ။
လေ၀ှ့ထိုးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ ညီဖြစ်သူလိုင်းယန်း..ညီဖြစ်သူကထူးချွန်လောက် အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေပြီးအမြဲဒုက္ခရှာတတ်တဲ့ အကိုဖြစ်သူ စတန်..လေ၀ှ့ကျော်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘ၀သစ်စမယ်လို့ကြွေးကျော်နေတတ်တဲ့ ညီအကိုပေါ့။
တစ်နေ့တော့ လေ၀ှ့ပွဲတစ်ပွဲရှုံးနိမ့်သွားလို့ အကြွေးရှင်တွေရဲ့စိတ်တိုင်းကျ Junglelandဆိုတဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကျင်းပတဲ့ပွဲမှာ သွားထိုးသတ်ဖို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ပြင်ရပါတော့တယ်။အဲဒီခရီးစဉ်တလျောက် စကိုင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုပါ ကြွေးရှင်တွေက ရီနိုကိုပို့ပေးဖို့တာဝန်ပေးပါတော့တယ်။
လိုင်းယန်းရယ် စကိုင်းရယ် စတန်ရယ်…သူတို့သုံးယောက်အတူတူသွားရင်းနဲ့ဘာတွေကြုံတွေ့ရမှာလဲ?အတူတူသွားရင်းနဲ့ စကိုင်းအကြောင်းကိုပါသိလိုက်ရချိန်မှာ သူတို့ညီအကိုနှယောက်ဘာဆက်လုပ်မလဲ?ညီအကိုနှစ်ယောက်ကရော အဆုံးထိမပြောင်းလဲဘဲ ချစ်ခင်သွားမှာလားဆိုတာ အဆုံးထိစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှု ရမှာပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်လေးပဲပြသွားတဲ့ဒီကားလေးကစိတ်ထဲမှာစွဲနစ်ခံစားမိစေမှာပါ။ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒရာမာကားကောင်းကောင်းလေးတွေမျှော်လင့်နေသူတွေအဖို့တော့ ကွက်တိပါပဲလို့ညွှန်းလိုက်ပါရစေ။ဇာတ်ကားလေးနာမည်က Jungleland(2019)ပါ။
Mr. Robot (Season 2) အပိုငျး (၃)
O-type Watermelon Chest Housekeeper – Link 1
She’s Lifting Her Shame Ban!! (Link 2)